Shir looga hadlayo horumarrinta Puntland oo lagu qabtay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
21st May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Garowe– Mareeg.com: Wakiilo farabadan oo ka socday beesha caalamka iyo maamaulka Puntland ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Garowe ee xarrunta maamulka Puntland.
Shirkaan waxaa looga hadlay horrumarka uu higsanayo maamulka Puntland, sida: kordhinta dhaqaalaha uu caalamku ku taageero Puntland, Barnaamijka Higsiga Cusub iyo weliba sidii Puntland gacan looga siin lahaa qorshe-horumarineed oo ay soo gudbisey, qorshahaas oo ku habeysan 5-ta sano ee soo socota.
Wakiilo ka kala socay Midowga Yurub, Midowga Afrika, Urur-goboleedka IGAD, Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM), dowladda federaalka Soomnaaliya iyo Bankiga Caalamka ayaa shirka ka qeybgalay.
Sidoo kale, waxaa ka qayb galay safiirro iyo diblumaasiyiin dhowr ah oo metelayey dalalka: Italy, France, Germany, Denmark, UAE, UK, Norway, Turkey iyo Sweden.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa C/xakiim Camey iyo weliba xubno dhowr ah oo ka kala tirsanaa goleyaasha wasiirrada iyo baarlammaanka ee Puntland ayaa sidoo kale shirka ka qeybagalay.
Shirka oo warbaahintu debadjoog ka aheyd ayaa markii uu dhamaaday waxaa warbaahinta si guud ula hadlay Madaxweynaha Puntland C/weli Gaas iyo Ergeyga Midowga Yurub u Qaabilsan Soomaaliya Michele Cervone d’Urso.
C/weli Gaas ayaa ka warbixiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka diiradda lagu saaray, wuxuuna tilmaamay in badankoodu ay ahaayeen kuwo khuseeya sidii loo kordin lahaa taageerada uu caalamku siiyo Puntland iyo weliba barnaamijkii uu caalamku horay u ballan qaaday inuu Soomaaliya ku taageerayo ee Higsiga Cusub.
“Waxaa kale oo looga hadlay shirka Baarnaamijka loogu magacdaray Higsiga Cusub, waxaan anagu dhankayaga sheegnay in aanan ka soo horjeedin barnaamijkaas laakin wixii aan ka qabney ayaan kala munaaqashoonay” ayu yiri C/weli Gaas.
Dan-jire Michele Cervone d’Urso oo ku hadlayey afka beesha caalamka ayaa isna sheegay in beesha caalamka ay ka go’an tahay inay si joogto ah ula shaqeyso maamulka Puntland iyadoo la eegayo dhinacyada ay Puntland soo gudbisey in laga taageero.
Shirkan ayaa ah midkii ugu horeeyey oo maamulka Puntland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Gaas magaalada Garowe kula yeesho dalalka deeqda bixiya iyo waliba hay’adaha caalamiga ah, xili Puntland ay sheegtay inay dooneyso sidii dardar loo gelin lahaa mashaariicda lagu balaarin-lahaa kaabayaasha dhaqaalaha sida; Airporada, Dekkada, Wadooyinka, Qalabeynta ciidamada Amniga iyo Xarumaha dowlada.